Puntland oo laga xusay ,aalinka Malaariyada Aduunka. | BALIBUSLE.COM
« (Video) Dowlada Kenya oo siisay waqti dheeri ah oo ay kaga faa’idaysan…
Deadline ugu badnaa oo inku show 800 qof oo qaxootiga Yaman kasoo qaxay oo yimid… »
Puntland oo laga xusay ,aalinka Malaariyada Aduunka.
(BB)Wasaaradda caaafimaadka dowladda Puntland ayaa maanta qabatay munaasabad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ah ee malaariyada oo sanad kasta ku beegan 25 bisha abril, Waxaana ka qeyb galay mas’uuliyiinta wasaaradda iyo bahda caafimaadka ee bulshada.
Cudurka Malaariyada ayaa sanad kasta dila in dhow hal malyan oo qof oo intooda badan ku nool qaarada Afrika. Barnaamijka la dagaalanka malaariyada Puntland ayaa sheegay inay hirgaliyeen 160 xarumood oo lagu bixiyo adeegada malaariyada, sida ka hortaga, daawaynta iyo wacyi galinta.
Dr Cabdi Kariin Xuseen Xasan oo madax u ah barnaamijka malaariyada ayaa sheegay in 12,000 oo guryo ah laga buufiyay sunta malaariyada, iyadoo 4.000 oo kamid ah guryahaasna ay ku yaalaan magaalada Bosaso oo ah halka ugu badan ee uu xanuunkaan ka dilaaco gudaha Puntland.
Agaasimaha guud ee wasaarada caafimaadka Puntland Dr Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa uga digay xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay inay ku deg degaan bixinta daawada malaariyada ama dadku ay ku deg degaan inay qaataan daawadaan iyagoo xanuunka aan qabin.
Wuxuu sheegay Agaasimuhu daawadaan inay dhaawac ugeysan karto beerka qofka, haddii uu qofku qaato isagoo aan xanuunkaan qabin, wuxuuna dadka ku wacyi galiyay inay ka faa’idaystaan daawooyinka lacag la’aanta ee wasaaraddu bixinayso.
Wasiir udowlaha caafimaadka Puntland Cabdullahi Maxamed Jaamac Cali ayaa sheegay xanuunkaan malaariyada inuu kamid yahay xanuunada qatarta ee u baahan in si laga hortaga, iyadoo xooga la saarayo wacyi galinta bulshada.